Indlela yokubamba iskrini se-Ipad - Geofumadas
Indlela Yokuthatha I-Ipad Screen
NgoJuni, 2011 Apple - Mac, Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Siphila kumaxesha okutya okukhawulezileyo, yonke into isendleleni, imodyuli, inokutshabalala kunye nokufaneleka. Kuninzi, ukuba sifunda izinto kwi-flight. Emva kweenyanga ezintandathu malunga nokusebenzisa i-Ipad, kwenzeka kum ukuba ndiyakwenza njani kwikhompyutha yedeskitha esiyibiza ngokuthi "ukuprinta isikrini"Okanye uguqulelwe ngolwimi lwethu" bamba umfanekiso weskrini".
Indlela eyenziwa ngayo kwi-PC
Ukukwenza ngePC, ikhibhodi izisa kwiinguqu ze-DOS iqhosha elisekunene elenza ukuthatha kunye nokudlulisa umyalelo ikopi. Emva koko ukwenza okwenene siya kwiprogram esithandayo (Paint, Word, Excel, njl.) Kunye nathi Senza / Hlanganisa okanye kwisiphene sayo Ctrl + V.
I siseko -kakhulu- kodwa ngesigwebo sokuba ikhofi kunye nama-donuts kule ntambama, ixesha elide ndingazi; kwaye le nto ndayisebenzisa i-Floppy disks kwi-5-1 / 4 kwi-IBM 286 kunye nesilathiso se-orange-hued esithatha ngqo kwi-retina ... elinye ibali.
Indlela eyenziwa ngayo ngePad.
Ndiqinisekisa ukuba ndiza kuthenga i-99 centi yesicelo ngenxa yokuba andizange ndiyifumane indlela. Kodwa akunakwenzeka ukuba izinto ezinjalo zokuqala azizange ziphunyezwe kwisixhobo esizalwe ngobuchule Steve Jobs, ngoko emva kokukhangela imizuzu embalwa ndafumana indlela.
Amaqhosha agqityiweyo kwigrafu acinezelwe ngexesha elifanayo. Oko kwenza uhlobo iphuphe kwi-blink, ngoko isandi sivakala ngathi sisuka kwikhamera yokubanjwa kwaye yile nto. Umfanekiso ugcinwa kwisicelo sesithombe, ngesisombululo se-1024 x 768 pixels.
Ukuzidlulisela kwikhompyutheni akusebenzi kunye nenkqubo ndiyichaze iintsuku ezimbalwa ezedlule, oko kukuthi kudlula ezinye iifayile kwi-PC. Kule meko i-Ipad ixhunyiwe kwikhompyutri kwaye ifunyenwe ngathi ulandela iifoto kwikhamera. Ukuba i-wizzard e-othomathikhi ayisebenzisi, iqhosha lokunene licofa kwi-device kunye Khetha imifanekiso.
Ndiyithatha umba ukukhuthaza imifanekiso emibini yentombi yam, endiyenzile nge-AutoDesk Sketchbook -Ndiyathemba ukuba andiyikubhabha i-bandwidth- Nangona le nguqulo ye-ipad ayinayo yonke imisebenzi ye desktop, kufuneka ndivume ukuba inamandla amakhulu. Intombi yam isichazele ukuba phantse ukunyathela kwindalo yakhe; Ndayisebenzise amaxesha ambalwa ekuqaleni kodwa emva koko wathatha isilingo emva kokuzama ukumfundisa upende ngeoli; Uphantse uyafa ngenxa yokuba unesifo sokuguqula.
Le yimizamo yakhe yokuqala.
Le yiklasi, ndifuna ukuyibona iyenza nge-acrylics.
Kule nto ndacela uncedo ukuchukumisa intlanzi ... ngoko ndazi ukuba ifayile igcinwa njengefayile lahle Ndandibuhlungu kwithuba elithile ngenxa yebhola endifanele ndiyichukumise.
Ngaloo nto wangibonisa ukuba kule nguqulelo entsha iibhulashi zazilayishwa njenge plugins.
Eyokugqibela senza kunye eKrismesi, xa ndamfundisa izinto ezisisiseko. Nangona ngokungazi kwethu senza konke into umaleko Njengokuba sasisebenzisa i-MS Paint, ngoko wafumanisa waza wangibonisa ukuba kwakunokwenzeka ukuyenza kwimihlathi eyahlukileyo.
Post edlulileyo«Edlulileyo Ukuthelekisa njani amaxwebhu amabini eLizwi
Post Next Ngaphesheya kwePadOkulandelayo "
Iimpendulo ze-2 "Indlela yokubamba isikrini se-Ipad"
umsebenzi obalulekileyo womsebenzi
Ndiyabonga kakhulu ngokukwabelana ngalo msebenzi.